Thwebula Ezvid 1.0.0.3 – Vessoft
Ezvid – a isofthiwe jikelele wathumba ividiyo kusuka screen. Isofthiwe ikuvumela ukuba alobe ividiyo and audio, thatha sikrini, ukwengeza umbhalo, imiphumela ehlukile njll Ezvid kuhlanganisa amathuluzi ukuhlela amafayela emidya futhi sikwazi ukwakha kubukiswa noma slide imibukiso. Isofthiwe ine umculo zayo umtapo siqu engasetshenziswa for sihambisana umsindo ukuze ividiyo. Ezvid isekela ethandwa abezindaba takhiwo futhi ikuvumela ukuba thwebula ividiyo ngomumo ku-YouTube.
Isiqophi ukuqopha kusuka screen
Ukuqopha yomsindo ikhono ukwakha izwi kuhlelwe
Akhiwa-in amathuluzi ukuhlela alalelwayo
Ikhono ukulanda amavidiyo ku-YouTube
Amazwana on Ezvid:
Ezvid Ahlobene software:
Screen bamba Isofthiwe wasithatha ividiyo kusuka computer yakho. Futhi kusekela irekhodi izingxenye ezithile kwesikrini futhi sidala sikrini.
English, Українська, Français, Español... Open Broadcaster Software 17 futhi 0.659b
Zokuham video Screen bamba Popular ithuluzi ukusakaza emfudlaneni abezindaba ku-intanethi. Isofthiwe isekela izilungiselelo ukusakaza ukukhulisa izinga video.
English, Українська, Français, Español... Fraps 3.5.99.15623
Screen bamba Isofthiwe ithumba ividiyo kusuka screen sakho bese ubheka FPS. Futhi isofthiwe kabanzi esetshenziswa gamers professional.
Screen bamba Zokuham video The instrument wathumba isiqophi kusuka computer yakho. Isofthiwe kwenza ukusakaza izenzo kusukela screen ethandwayo isiqophi amasevisi.
Isiqophi converters Screen bamba The enamandla sevidiyo. Isofthiwe isekela ezihlukahlukene amathuluzi wathumba video kusukela computer yakho futhi uwahlele.
Movavi Screen Capture Studio 8.0.2
Screen bamba Isofthiwe ukuze uthwebule ividiyo kusuka screen sakho futhi wenze sikrini. Isofthiwe ikuvumela ukuba ngokwezifiso izilungiselelo eziningi wokubamba screen izidingo yomsebenzisi.
Screen bamba Imidlalo Isofthiwe obusebenzayo wathumba isiqophi kusuka computer yakho. Isofthiwe kuhlanganisa ubuchule ekhethekile ukuthi ukuvimbela umthelela ijubane izicelo ngesikhathi kumarekhodi abo.
Screen bamba Ithuluzi ukuba balobe Skype Voice namakholi wevidiyo in high. Isofthiwe ikuvumela ukuba wamisa yokuqopha ngokuzenzekelayo izingcingo nokuqopha inombolo ekhethiwe of interlocutors.
English, Français, Español, Deutsch... Wink 2.0.1060
Screen bamba Graphics and design Isofthiwe ukudala tutorials kanye nezethulo. Isofthiwe ine izici eziningi ewusizo futhi kwenza ukusebenzisa amafayela image of ngetakhiwo letehlukene.
English, Français, Español, Deutsch... XSplit Broadcaster 2.9.1611.1627
Zokuham video Screen bamba Isofthiwe osakaza le video zokwakha internet. Isofthiwe isekela ukusakazwa video ukusakaza kusuka computer futhi ikhamera on the popular video amasevisi.
English, Français, Español, Deutsch... Freenet 0.7.5
Downloaders Internet Isofthiwe ukusebenza kanye endlalekile engaziwa inethiwekhi FreeNet. Isofthiwe lusiqinisekisa exchange ephephile amafayela kanye thwebula idatha ehlukahlukene.
English, Français, Español, Deutsch... XAMPP 5.6.28
Development Beka ngezidingo ewusizo ukwakha server web egcwele. Isofthiwe iqukethe module ukucabanga eningiliziwe izibalo ukuvakasha Webalizer kanye FTP-client FileZilla.
Amafayela Isofthiwe ukuze sigcine noma yimaphi amafayela isitoreji ifu. Isofthiwe isekela ukuvumelanisa amafayela phakathi amadivaysi ngokusebenzisa internet.
EaseUS Todo Backup 9.2
Akwazi ukugcina Isofthiwe ubuyisele idatha uma kwenzeka isimo ezingalindelekile. Isofthiwe uyakwazi ukusekela ngokulondoloza kohlelo ne izilungiselelo zamanje.
English, Français, Español, Deutsch... HandBrake 1.0.1
Isiqophi converters Ithuluzi ukusebenza nge amafayela video futhi ukuguqula takhiwo ehlukahlukene. Isofthiwe usebenza nge subtitles futhi likuvumela ukusebenzisa izihlungi noma codecs lapho ekuguquleni.